Shina masoaryro eny an-dalana fahazavana amin'ny Lithium bateria mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Solar Street Light > masoandro eny an-dalana fahazavana amin'ny Lithium bateria
Tombontsoa 1, azo antoka kokoa. Ny jiro mandeha amin'ny herin'ny bateria an'i Lithium dia manana ny toetran'ny bateria maina ary azo antoka kokoa ary tsy azo antoka kokoa noho ny bateria mitarika asidra sy ny bateria gel.
Ny tombony 2, lanja maivana. Raha ampitahaina amin'ny bateria hafa, ny bateria lithium dia manana hamafin'ny angovo mahery kokoa, mahatratra 460-600Wh / kg, sahabo 6-7 eo ho eo ny bateria mitarika asidra. Midika izany fa ny bateria lithium dia maivana kokoa amin'ny lanjan'ny fiampangana mitovy. Ny taham-pahalalana mitovy amin'izany dia kajy ho an'ny 1 / 5-1 / 6 amin'ny vokatra asidra mitarika.
Ny tombony 3. Tsy fandoto. Jiro mandeha amin'ny herin'ny bateria an'ny Lithium bateria dia bateria tsy mora vonoina ary tsy misy loto. Ankoatr'izany, ny jiro aretin'ny masoandro eny amin'ny arabola-lead-acid dia matetika no voatsikera mandritra ny fampiasana. "Herintaona ny tapany taona vaovao, roa taona ny fikojakojana sy fikojakojana" ary fohy ny fiainana ny serivisy. Ny fiainana ny serivisy jiro an'ny litaon'ny hazavana litaon'ny masoandro dia amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny 10 taona, ary ny fiainana fanompoana an'ny loharanon-jiro LED dia amin'ny ankapobeny 10 taona (tokony ho 50 000 ora), ny rafitra mifanandrify tonga lafatra.
Tombontsoa 4, fanoherana ny mari-pana sy ny adaptable ambany. Ny batterie lithium dia azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana -45 Â ° C - 60 Â ° C ary azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana -45 Â ° C aorian'ny fanodinana. 5 Tombontsoa 5. Ny jiro hazavana an'ny aretin-jiro an'ny litaika dia afaka mandanjalanja sy kajy ny sisa tavela amin'ny bateria arak'izay ilain'ny mpampiasa, andro aman'alina, toetr'andro sy ny antony hafa, ny fizarana ny herin'ny herinaratra, mba hahatratrarana ny jiro sy ny fiasa hafa. . Ny fanaraha-maso ny fotoana sy fitadidiana fitehirizana. Ataovy azo antoka fa manohy ny jiro mandritra ny folo andro amin'ny andro orana mitohy.
Buy masoandro eny an-dalana fahazavana amin'ny Lithium bateria nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba masoandro eny an-dalana fahazavana amin'ny Lithium bateria ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized masoandro eny an-dalana fahazavana amin'ny Lithium bateria Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.